मधेसी मोर्चाले भन्यो– महन्थलाई राष्ट्रपति दिए प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन ! – www.agnijwala.com
मधेसी मोर्चाले भन्यो– महन्थलाई राष्ट्रपति दिए प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन !
२७ माघ– राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति प्रस्ताव नराखेको दाबी गरेको छ ।
केही दिनअघि ओलीले ठाकुर भेटेका थिए । दुई मधेसी घटक राजपा र फोरम नेपालको समर्थन पाए माओवादी केन्द्रलाई सरकार बाहिरै राख्ने योजनामा रहेका ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउने सर्तमा ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति प्रस्ताव गरेको समाचारहरु आएका थिए । तर, ओलीबाट त्यस्तो प्रस्ताव नआएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजकिशोर यादवले बताए । ‘भेट भएको हो । तर, उपराष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको होइन’, यादवले बताए ।
उनले ठाकुर उपराष्ट्रपति नभई राष्ट्रपति हुने क्षमताका नेता भएको दाबी गरे । ‘महन्थ ठाकुर मधेसका सबैभन्दा सिनियर र पाका नेता हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँ भए राष्ट्रपति हुने हो, उहाँलाई उपराष्ट्रपतिमा प्रचारित गरिनु उहाँको ठूलो अपमान हो ।’ विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिने पक्षमा रहेका उपराष्ट्रपति ठाकुरलाई बनाउन पाए मधेस र पहाडको सन्तुलन मिल्ने ओलीको बुझाई छ ।
यद्यपि राष्ट्रपति दोहोरिने अवस्थामा आफू पनि दोहोरिन पाउनुपर्ने अडान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनले आपसी सल्लाहमै दुवैजना दोहोरिने गरी लविङ गर्दै आएका छन् ।авито частные объявленияpayperprofits.eduterrasites historicalvpnst petersburg infoлогистика интернет магазина